गत आर्थिक वर्ष सेयर बजारमा के-के भयो ? उत्साहजनक वर्ष भएको नेप्सेको निष्कर्ष - Arthasansar
गत आर्थिक वर्ष सेयर बजारमा के-के भयो ? उत्साहजनक वर्ष भएको नेप्सेको निष्कर्ष
सोमबार, ११ साउन २०७८, १७ : १८ मा प्रकाशित
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सेयर बजारका लागि उत्साहजनक भएकाे नेपाल स्टक एक्सचेञ्च (नेप्से) ले जनाएकाे छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्च (नेप्से) ले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भएका सेयर बजारका प्रमुख गतिविधिहरूलाई समेटी एक प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै गत आर्थिक वर्ष सेयर बजारका लागि उत्साहजनक रहेकाे बताएकाे हाे ।
काेभिड १९ काे विषम परिस्थितिमा पनि गत वर्ष धिताेपत्रकाे दाेश्राे बजारमा उत्साहजनक काराेबार भएकाे नेप्सेले जनाएकाे छ । नेप्सेले २०७५ साल कार्तिक २० गतेदेखि पूर्ण स्वचालित अनलाइन काराेबार प्रणाली (नट्स) सञ्चालनमा ल्याएदेखि दाेश्राे बजार काराेबारमा सकारात्मक परिवर्तनहरू देखा परेकाे नेप्सेकाे विश्वास छ ।
गत आर्थिक वर्ष सेयर बजारमा के के भयो ? तलकाे विज्ञप्ति मार्फत् हेर्नुहाेस् :